Ogaden News Agency (ONA) – 1000 Kamid Ah Macalimiinta Itoobiya oo India Kutabaalaysan, Sababta?
1000 Kamid Ah Macalimiinta Itoobiya oo India Kutabaalaysan, Sababta?
Xukuumada dhagarta iyo dhuuni qaate nimada kucaan baxday ee gumaysiga Itoobiya ayaa si bini’aadam nimada kabaxsan ula dhaqantay qaar kamid ah macalimiinta wax kadhiga dugsiyada hoose dhexe ee wadanka Gumaysiga Itoobiya.
Sida xogta aan kuhelayno taliska wayaanaha ayaa 1000 macalim oo kuwa dugsiyada wax kadhiga ah udirtay wadanka India, kuwaas oo lasheegay in ay soo qaadan doonaan tababar dhowr bilood ah oo lootababari doono qaabka habka loomaro wadada waxbarashada.
Warka ayaa intaas kudaraya in macalimiintii loodiray wadanka India ay soo wajahday aqabad aad uxun, waxaana lasoo sheegayaa in ay macalimiintu waayeen cunadii iyo tasiilaadkii kale ee ay ubaahnaayeen waxaana lasheegayaa in looqabsaday kiradii guryihii ay daganaayeen oo mudo aysan iska bixinin.
Mid kamid ah macalimiinta kusugan wadanka India ayaa warbaahinta usheegay in ay kusugan yihiin xaalad aad u adag, wuxuuna sheegay in mudo dheer aysan helin wax lacag ah oo ay kumaareeyaan noloshooda wuxuuna macalimku intaas kudaray in qaar iyaga kamid ah laga saaray guryihiin ay kujireen.
Macalinka oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in markii lasoo qaaday loosheegay in bilkasta lasiin doono 350$ taas oo sida uu macalimku sheegay beenowday, wuxuuna macalimku sheegay in iska daa lacag lasiiyee ay waayeen wax ay cunaan ama cabaan.
Dhinaca kale ninka macalimka ah ee saxaafada lahadlay ayaa aduunka kacodsaday in si dag dag ah loosoo gaadhi isla markaana laga caawiyo dhibaatada lixaadka leh ee ay kala kulmeen wadanka ay kusugan yihiin ee India.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya oo sanadihii udambeeyayba kujirtay hanti uruursi iyo qalalaase siyaasadeed ayaa awoodi wayday in ay macalimiinteeda dibada loodiray lacagihii ay ubaahnaayeen siiso, waxaana xukuumada isugu darsamay musuq maasuq baahay oo gudahooda ah iyo wax soosaarkii wadanka oo meesha kabaxay.